पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ फाल्गुण १ गते (सन् २०२१ फरवरी १३ तारिख) शनिबार - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ फाल्गुण १ गते (सन् २०२१ फरवरी १३...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ फाल्गुण १ गते (सन् २०२१ फरवरी १३ तारिख) शनिबार
१ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०८:५४
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरौं । कर्मबाटै भाग्य निर्धारण हुने गर्दछ।
मेष – आरोग्यता बढ्ला । सुख समृद्धि बढ्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । भाग्योदय कारक काम बन्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । मान पुरस्कार प्राप्त हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आयात–निर्यातसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । सुख सुविधा बढ्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग समर्थन मिल्नेछ ।
बृष – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य धन यश मान महत्व बढ्ला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । गौरव वृद्धि होला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ ।
तुला – यात्रामा सफलता मिल्नेछ । धर्म कर्ममा आकर्षण बढ्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । सुख शान्ति मिल्ला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आनन्दित रहनु हुनेछ ।
वृश्चिक – दिन मिश्रित फलदायक रहला । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । भुलचुकप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्नेछ । खर्च र लगानी बढ्ला । योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु हितकर रहला । नियमकानूनलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुने छैन । जोखिममा नपर्नु बेस रहला ।
धनु – सुख समृद्धि मान यश महत्व बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । अन्न धन बढ्नेछ । आय स्रोत बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुसँगै लगानी लगाइएको धन उठ्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । जीवनसाथीको पनि सहयोग समर्थन मिल्नेछ ।
कुम्भ – शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ । यात्रा होला । धर्मकर्ममा रुचि बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ ।
अघिको समचार विराटनगरमा हुने नेकपा ओली समूहको आमसभामा प्रधानमन्त्री आउने
अर्को समचार पत्रकार महासंघ मोरङको बनभोजमा रंगेली नगरप्रमुख अग्रवालले भने– उज्यालो रंगेलीका लागि माया गरिदिनुस्